भारतिय मिडियालाई सन्दिपले भने – म फेरि आईपिएल खेल्न चाहन्छु । – Yuwa Aawaj
भारतिय मिडियालाई सन्दिपले भने – म फेरि आईपिएल खेल्न चाहन्छु ।
बैसाख १६, २०७८ बिहिबार 301
काठमाडौं : भर्खरै काठमाडौंमा सम्मन्न त्रिकोणात्कम शिरिजमा शानदा प्रदर्शन गर्दै नेपाललाई एैतिहासिक उपाधी दिलाउन महत्वपुर्ण भुमिका निभाएका नेपाली स्पिनर सन्दिप लामिछानेले पुन: आईपिएल खेल्ने इच्छा ब्यक्त गरेका छन् ।
सन्दिपले भारतको चर्चित मिडिया ‘टाईम्स अफ इन्डियासँग आईपीएल अनुभव, नेपाली क्रिकेट लगायत विषयमा कुराकानी गर्दै उक्त कुरा बताएका हुन् । ” बिश्वको चर्चित लिगको दिल्ली क्यापिटल्सबाट खेल्ने अवसर पाउनु मेरो लागि निकै ठुलो कुरा थियो ।
यो मेरो जिवनकै भबिष्मरणिय क्षण थियो जुन म लामो समयको लागि सम्झनेछु। रिकी पोन्टिङको प्रशिक्षण र श्रेयस ऐयरको कप्तानीमा खेल्नु मेरो लागि विशेष अनुभव थियो। मैले ३ बर्ष दिल्लीको टिममा रहदा धेरै कुरा सिक्न पाए । ” टाईम्स अफ इन्डियालाई सन्दिपले बताए ।
त्यस्तै यसपटकको आईपिएफ खेल्न नपाएको बिषयमा कुरा गर्दै सन्दिपले भने “ यसपटक टिमलाई स्पिरहरुको त्त्यति धेरै आवश्यकता थिएन । दिल्ली क्यापिटल्सकै कुरा गर्नु पर्दा पनि टिम स्पिनरले भरिपूर्ण छ यो सिजन।
त्यसैले उनीहरु ब्याट्सम्यान चाहन्थे। केहि छैन, सधै आफुले सोचेजस्तो हुदैन ।” आईपीएल फेरी खेल्ने मन छ भने प्रश्नमा सन्दिपले भने “अवस्य पनि , यदी कुनै टिमले मलाई लिएको खण्डमा म पक्कै पनि फेरी आईपीएल खेल्न चाहन्छु।” ￼
लामिछानेले पहिलो पटक सन् २०१८ मा दिल्लीबाट आइपीएल खेलेका थिए । उनी त्यो बेला रु ३२ लाखमा अनुबन्ध भएका थिए । सन् २०१९ र सन् २०२० मा दिल्लीको टोलीमा रहेका लामिछानेलाई फुकुवा गरेपछि उनी यस पटक अक्सनमा सहभागी भएका थिए । सन् २०१८ को आइपीएलमा लामिछानेले तीन खेलमा पाँच विकेट लिएका थिए ।
दोस्रो वर्ष सन् २०१९ को आइपिएलमा लामिछानेले छ खेलमा आठ विकेट लिएका थिए । तेस्रो वर्ष सन् २०२० को संस्करणमा भने उनलाई कुनै पनि खेलमा खेल्ने मौका दिइएको थिएन । उनले आइपिएलमा अहिलेसम्म ९ खेल खेल्दै १३ विकेट लिएका छन् ।
त्यस्तै नेपालका सुपरस्टार बलर सन्दीप लामिछानेले नेपालमा भएको त्रिकोणात्मक शिरिजमा कीर्तिमानी बलिङ गरे । पाँच खेलमा उनले १३ विकेट लिन सफल भए, जुन कुनै पनि टी-२० अन्तर्राष्ट्रिय सिरिजमा नेपाली बलरको उच्च प्रदर्शन हो ।
प्रतियोगितामा सर्वाधिक विकेट लिने बलर बनेका छन् उनी ।
सन्दीपले कुल १९.५ ओभर बलिङ गर्दा ८.२१ को इकोनोमीमा १६३ रन खर्चिए । उनी केही महंगा अवश्य भएका हुन् । तर, आफ्नो ‘विकेट टेकर’ छविलाई कायम राख्न उनी सफल भए । उनले १२.५३ को औसत कायम गरेका छन् ।
Prevहवाई यात्रुले विमानस्थलका प्रिपेड ट्याक्सी घरमै बोलाउन पाउने !
Nextधुर्मस र नेपाल सरकार बिच भेटवार्ता ! (तस्बिर सहित)
नेपालीलाई भइरहने यी ३ रोग त औषधी नखाइ ठिक हुन सक्छन्- थाहा पाउनुहोस ।
नेकपा नाम विवादकाे फैसला सर्वोच्च अदालतले आज फैसला गर्दै ।
बाइडेनलाई किमकी बहिनीको चेतावनी : राम्रोसँग सुत्ने भए हाम्रो देशमा बा’रुदी ग’न्ध नफैलाउ ।
नेपालीलाई भइरहने यी ३ रोग त औषधी नखाइ ठिक हुन सक्छन्- थाहा पाउनुहोस । (3960)